Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Shaqaalaha Alitalia waxay ku shaqeynayaan Bilaash
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Alitalia Ma Bixiso Shaqaalaha
Alitalia ma bixiso mushaharkeeda. Dheh komishannada: "Waxaan ku bixin doonnaa lacagta sumadda." Ilaa hadda, shirkaddu waxay bixisay kala bar jeegaggii bishii Sebtember. Hadhaaga waxaa la bixin doonaa kaliya ka dib markii guddiyadu ay haystaan ​​“caddeynta natiijada ku dhawaaqista summadaha.”
Qandaraaska wuxuu socon karaa dhowr toddobaad, maxaa yeelay dalabyada ugu horreeya ee la qabanayo waa in la soo gudbiyaa Oktoobar 4 markay tahay 2 duhurnimo, qiimaha ugu yar ee 290 milyan oo yuuro (oo lagu daray VAT).
Laakiin ma jiro wax side ah oo u muuqda inuu xiiseynayo iibsashada astaanta marxaladdan.
"Qiimeyntu waa mid aan macquul ahayn," ayuu yiri Alfredo Altavilla, Madaxweynaha ITA, diyaaradda cusub, oo laga yaabo inay tahay shirkadda aadka u danaynaysa astaanta shirkaddii hore.
Qiimaha Saldhiga 290 Milyan
Si aad u sameyso dalab heerkan ah, waxay u baahan tahay bixinta 40 milyan oo euro. Kaliya dadka haysta liisanka gaadiidka hawada ama AOC (Shahaadada Hawl -wadeenka Hawada) iyo qiimihiisu yahay ugu yaraan 200 milyan ayaa ku biiri kara qabashada.
Haddii aysan jirin dalabyo u dhigma ugu yaraan qiimaha saldhigga ah, guddiyadu waxay furi doonaan wareegga labaad ee dalabyada qabashada.
Wicitaanka hindisooyinka, oo loogu magacdaray “martiqaad,” wuxuu bixiyaa wejiga labaad haddii aysan jirin dalabyo ku habboon wajiga koowaad. Xaaladdan oo kale, guddiyadu "waxay fulin doonaan wajiga labaad ee abaalmarinta iyagoo ka codsanaya dhammaan maaddooyinka la oggolaaday inay soo bandhigaan dalabyo ku -meelgaar ah sidoo kale hoos u dhac ku yimid qiimaha la soo bandhigay."
Lama sheegin qiimaha saldhigga u ah wareegga labaad. Calaamaddu waxay leedahay qiime buug oo ah 150 milyan oo ku jira bayaannada maaliyadeed ee Alitalia. Sidaa darteed lagama yaabo inay ka hoos dhacdo shaxdan.
Wareegga Saddexaad: Xulashada Xulashada Komishannada
Haddii marka hore sida wajiga labaad ay jiraan dalabyo dheeri ah, waxay ku xigi doontaa kor u qaadista, laga bilaabo dalabka ugu fiican, qaddar “aan ka yarayn 10 milyan oo euro.” Haddii wareegga labaad uusan sidoo kale ku qancin, nidaamka waa la beddeli doonaa. “Komishannada aan caadiga ahayn ayaa markaa ka dib sii wadi doona iibinta sumadda iyada oo aan lahayn caqabado nidaamsan oo ku wajahan hawlwadeenka dhaqaalaha ee ay aqoonsadeen,” ayaa lagu yiri war -saxaafadeedka.
Wareegga saddexaad, sidaas darteed, waxaa jiri doona ikhtiyaarrada guddiyada. Marxaladdan, Ita geli kara, oo ujeeddadiisu tahay in la iibsado sumadda laakiin aan suuxin.
“Calaamadda waxaa loo diyaarin doonaa tartame guuleysta bisha Diseembar 31, 2021,” ayaa lagu yiri casuumaadda ay daabaceen guddiyadu.
Shaqaalaha 10,500 ee Alitalia, waxaa jira, sidaas darteed, sugitaan dheer si loo helo dheelitirka mushaharkooda bisha Sebtember. Mana la hubo in aakhirka lacag jirto. Isgaarsiinta gudaha, guddiyada Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande, iyo Daniele Santosuosso waxay u qoreen shaqaalaha:
“Sidaad ogtihiin, hawlaheenna ay ku jiraan laanta duulista hawada ayaa la filayaa inay dhammaadaan 14 -ka Oktoobar, sidaa darteed, waxaa nagu khasab ah inaan maareynta maaliyadda shirkadda si joogto ah u maareyno yoolkan, annagoo tixgelineyna xiritaanka iibka ee 24 -kii Ogosto ay abuurtay joogsi la taaban karo ee dakhliga.
“Waxaan aad uga xunahay inaan idinku wargalinno in mushaaraadka bisha hadda la isku hagaajin doono 50% oo qiimihiisu yahay Isniinta, Sebtember 27, halka 50% soo hartayna lagu xisaabin doono isla markaan helno caddaynta natiijada ee ku dhawaaqista astaanta, sida ay u baahan yihiin Komishanka Yurub. ”
Dhab ahaantii, sharcigu wuxuu dhigayaa in lacagta ka soo baxda iibinta hantida loo isticmaalo mudnaanta si loo taageero kharashaadka hadda jira, ugu horrayn mushaharka.